Global Voices teny Malagasy · 5 Aogositra 2018
05 Aogositra 2018
Tantara tamin'ny 05 Aogositra 2018
Fifidianana indiana tamin'ny 2009: Jiolahy sy vatom-pifidianana
Jiolahy maro izay nivadika ho mpanao politika no atolotry ny antoko politika maro ao India ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena 2009. Maneho hevitra amin'izany ny vahoaka.
Azia Atsimo 05 Aogositra 2018
Afganistana : Fahatairana ara-politika
Afganistana 05 Aogositra 2018
''Raha toa ka efa nalaza tany amin'ny ampahan'ny gazety tandrefana ilay lazaina hoe «lalàna mikasika ny fanolanana», miteraka adihevitra be ao amin'ny firenena ihany koa izany. Tamin'ny fomba niavaka, norakofan'ireo gazety mahazatra ny diabe nataon'ny vehivavy, saingy misy endrika ara-pivavahana mila heverina ihany koa.''
Nepal : Fanonganam-panjakana tsy nahomby?
Nepal 05 Aogositra 2018
''Tamin'ny 2008 no nipaoka ny fifandirana rehefa nanomboka niadian'ny mpanao politika nepaley hevitra ny mikasika ny fampidirana ireo maoïsta mpiady anaty akata taloha [amin'ny teny anglisy toy ireo rohy rehetra voatanisa anatin'ny lahatsoratra], fantatra kokoa toy ny Tafika ho an'ny fanafaham-bahoaka (ALP), ho ao anatin'ny tafika nasionaly. Efa novinaniana fa mety hisy vokany eo amin'ny rafitra sy ny fahamarinantoeran'ny tafika nasionaly ity dingana ity.''